नवराज सिलवालले दिए सरकारलाई यस्तो चुनौती……’दोषीलाई कारवाही गर’ – Setosurya
आइजिपी प्रकरणदेखि चर्चामा आएका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल आइजिपी नभए पनि चर्चामै छन्। विशेषतः अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कीर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु भएपछि उनको चर्चा सेलाएको छैन। प्रहरीले उनीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बयानका लागि सिलवाललाई उपस्थित गराउन प्रहरीले पटक/पटक पत्राचार गरेको छ। तर, उनी फेला पर्न सकेका छैनन्। कतिपयले सिलवाल अमेरिका रहेको बताएका छन् भने कोहीले देशभित्रै रहेको दाबी गरेका छन्। तर, सिलवाल कहाँ छन्? उनलाई हामीले सोध्दा जवाफमा भने, ‘म अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नै छु।’ यो कुरा पहिलो पोस्ट ले छापेको छ । प्रस्तुत छ सिलवालसँग पहिलो पोस्टले गरेको संक्षिप्त कुराकानी
प्रधानमन्त्री को बन्ने र सरकार कसको भन्ने भ्रमका बीच प्रचण्डले बल्ल खोले रहश्य !
म्याग्दीका तीनै सिटमा बाम गठबन्धन बिजयी
मत परिणाम आउन बाकीं ९ क्षेत्रमा पनि एमालेकै अग्रता, यस्तो छ ताजा मतपरिणाम
पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका भुसाल र उपाध्यक्षमा गुरुङ निर्वाचित
यसरी बन्ने भए नेकपाका केन्द्रदेखि स्थानीय कमिटीहरु ! हेर्नुहोस् कुन कमिटीमा कसरी समायोजन हुँदैछ ?